विपदको बेला सबै एकतावद्ध भएर काम गर्र्नुुपर्छः उपप्रमुख लिलादेवी लामिछाने | Nijgadh.com
विपदको बेला सबै एकतावद्ध भएर काम गर्र्नुुपर्छः उपप्रमुख लिलादेवी लामिछाने
Home Unlabelled विपदको बेला सबै एकतावद्ध भएर काम गर्र्नुुपर्छः उपप्रमुख लिलादेवी लामिछाने
(निजगढ नगरपालिकाव्दारा उत्पादित ‘कोरना नियन्त्रणमा हाम्रो प्रयास’ कार्यक्रमको लागि नगरपालिका उपप्रमुख लिलादेवी लामिछानेसंग गोकुल घोरसाइनेको सहयोगमा पत्रकार महेश्वर अधिकारीले गरेको कुराकानी)
कोरोना भाइरस प्रकोप संक्रमण÷नियन्त्रण रोकथामको लागि निजगढ नगरपालकाले कस्तो प्रयास गर्दै आएको छ?
नगरपालिकाले शुरुदेखि नै सचेतना कार्यक्रममार्फत संक्रमणबाट जोगिने उपाय बारेमा जनतालाई जानकारी दिदै आएको थियो । पहिलो चरणअन्तरगत हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरुले नगरका विद्यालयमा पुगेर छात्रछात्रा, शिक्षक, अभिभावहरुमा सचेतनासम्बन्धि कार्यक्रमहरु चलाउनुभयो । हरेक वडा र टोलटोलमा पनि यस्ता कार्यक्रम संचालन गरिएका छन । त्यसैगरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५ शैयाको आइशोलेशन बेड र सबै वडामा क्वारिन्टाइन कक्ष पनि स्थापना गरिएको छ । देशबाहिर र भित्रै पनि अन्य स्थानबाट निजगढ भित्रिने मानिसहरुको अभिलेख तयार पारेर निगरानीमा राख्ने काम हुदै आएको छ । बाहिरबाट आएकालाई चेकजाचपछि अवस्थाअनुसार नगरपालिका वा घरमै पनि स्वास्थ्यकर्मीले क्वारेनटराइनमा बस्न सम्झाइबुझाइ पठाउने गरेका छन । त्यसैगरी अहिले हामीले महामारी र यसको असर जारी रहेको अवस्थाको यसको सामना गर्न १ करोड २ लाखको कोष खडा गरेका छौं । कोषमा जम्मा भएको रकम कोरना भाइरस संक्रमणको उपचारमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न र लकडाउनले समस्यामा परेका दैनिक ज्यालादारी मजदुर तथा विपन्न समुदायका मानिसहरुको लागि राहत दिने कार्यमा खर्च गरिरहेका छौं ।
नगरपालिकाले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइन अलि अपाङ्ग मैत्री भएनन् भन्ने गुनासो पनि छ । यस्मा तपाई के भन्न चाहानुहुन्छ?
नगरपालिकाले बनाएका क्वारिन्टाइन अपाङ्ग मैत्री नभएको भन्ने कुरा केही हदसम्म सही हो । उद्योग बाणिज्यसंघ र केही विद्यालयमा बनेका क्वारिन्टाइनहरु अपाङ्ग मैत्री नै छन । केही विद्यालय भवनहरुमा भने त्यस्तो सुविधा नभएकोले पनि यस्तो भएको हो । स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरेर बनाइएका हुनाले यसलाई ठुलो विषयको रुपमा लिन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तर पनि हामी यो समस्याप्रति सजग छौं । उहाहरुलाई राख्ने ठाउ नै नभएको भने होइन । अपाङ्ग बिरामीहरु आउनुभयो भने हामी उहाहरुलाई अनुकुल हुने क्वारिन्टाइनमा राख्ने प्रवन्ध गर्ने नै छौं । नगरपालिकाले अपाङ्ग बिरामीहरुको सुरक्षा र उपचारमा समस्या उत्पन्न हुन दिने छैन ।
प्रकोपको बेलामा सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढन जरुरी हुन्छ । नगरपालिका आफैलेमात्रै हल गर्नसक्ने कुरा पनि होइन यो । तर नगर स्तरीय कोराना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा अनुगमन समिति गठनमा केही भएको देखियो । यस बिषयमा स्थानीय राजनितिक दलहरुले पनि असन्तुष्टी जनाएका थिए । त्यस्तो किन भएको हो?
समिति गठनमा नै ढिलाइ भएको भन्ने चाहि हैन । संघीय र प्रदेश सरकारको निर्देशन आए लगत्तै हामीले सर्वपक्षिय समिति गठन प्रकृया शुरु गरेको थियौं । फेरि पछि सरकारले समितिलाई सर्ददलीय बनाउनु पर्ने भनेपछि सोही अनुसार गरिएको छ । समिति गठनमा नगरपालिका र स्थानीय दलबीच शुरुका दिनमा केही असमझदारी उत्पन्न भएकै हो । सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछिको तत्कालिन अवस्थामा हामीमा पनि केही अन्यौलता आयो । कार्यालयका अधिकांश कर्मचारी अघिल्लो राति नै बिदा भनेर घर गैसक्नुभएको रहेछ । सरकारी निर्देशनअनुसार काम गर्न हामीलाई भ्याइनभ्याइ थियो । सिमित कर्मचारीका बाबजुद केही वडा अध्यक्ष ज्युहरुसंगको समन्वयमा हामीले त्यतिबेला सर्वपक्षिय समिति बनाएर काम अघि बढाउदै आएका थियौं । यसबीचमा मैले समितिलाई सर्वदलीय स्वरुपको बनाउन बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको पनि थिए । यो बिषयमा नगर प्रमुख पनि सकरात्मक नै देखिनुभएको थियो । तर कामको व्यस्तता र समय अभावले तत्काल दलका साथीहरुलाई बोलाएर समिति गठन गर्न भने भ्याइएन । यसले दलका साथीहरुबीच केही असमझदारी उत्पन्न भएको देखियो र त्यति नै बेला उहाहरुले पनि आफनो असन्तुष्टि जाहेर गर्नु भएको हो । पछि कार्यपालिकामा पनि यो कुरा जोडतोडका साथ उठेक सबैलाई अवगत नै छ । त्यसपछि समिति गठनको लागि जब पुन पत्राचार भयो दलका साथीहरु पनि अहिले संगै सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय समितिमा बसेर काम गर्दैै हुनुहुन्छ । अब यस विषयमा कुनै विवाद छैन । विपदको बेलामा एकजुट भएर जानुपर्ने हामी सबैको कर्तव्य पनि हो । अहिले हामी सबै संक्रमण विरुद्धको लडाईमा हामी सबै एकतावद्ध भएर काम गरिरहेका छौ ।
समितिमा महिला प्रतिनिधित्व न्युन देखिएको पनि देखिन्छ। यसमा तपाईहरुले केही सोच्नु भएको छैन?
समितिमा अहिले म र नगरपालिका विपद व्यवस्थापन समितिको १ जना संयोजक गरी २ जनामात्र महिला सदस्य छौं । हाम्रो कारणले समितिमा महिलाको संख्या न्युन हुन पुगेको पनि हैन । प्रदेश सरकारले नै यसको संरचना तोकेर पठाएको थियो । हामीले सोही निर्देशनअनुसार विभिन्न राजनितिक दल र संघ संस्थाबाट प्रतिनिधि मागेर समिति गठन गरेकामात्र छौं । यसमा नगरपालिकाले उहाहरुलाई महिलालाई नै प्रतिनिधि पठाउनुहोस भन्न सक्ने कुरा पनि थिएन । यदि समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन जरुरी ठानिन्थ्यो भने सम्बन्धित दल र संघसंस्थाबाट नाम पनि त्यसरी नै आउनुपर्ने हुन्थ्यो । तर कतैबाट एक जना महिलाको नाम पनि आएन । हाम्रो समाजमा महिलालाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोण र पितृसत्तात्मक सोचका कारण यस्तो भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । आगामी दिनमा हरेक क्षेत्रामा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने कुरामा सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
लकडाउनपछि दैनिक ज्यालादारी गरेर जिविकोपार्जन गर्नेहरुलाई समस्या पर्न थालेको छ । उनीहरुको राहतको लागि चाहि नगरपालिकाले कसरी काम गर्दै आएको छ?
जतिबेला प्रदेश र संघीय सरकारले राहत वितरणको लागि केही बोलेको थिएन । तर हामीले यस्तो समस्या आउन सक्छ भनेर शुरुका दिनहरुमा नै ४० टन चामल जोहो गरेर राखेका थियौंं । त्यतिबेला नै खरिद प्रकृया शुरु भैसकेको खाद्यान्न नै अहिले आएर वितरण गरिएको हो । हामीले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका परिवारमा पहिलो चरण अन्तरगत राहत उपलब्ध गराउने काम पुरा गरिसकेका छौं । जहासम्म लाभग्राहीको सुची तयार पार्ने र राहत वितरण गर्ने प्रकृयाको कुरा छ । त्यसकोलागि नगर कार्यपालिकाले राहत वितरण मापदण्ड पारित गरेर सोहीअनुसार वितरण गरिएको हो । यसको लागि प्रतेक वडामा वडा अध्यक्ष ज्युहरुको संयोजकत्वमा गठन भएको सर्वदलीय÷सर्वपक्षिय समितिले स्थानीय स्तरमा अध्ययन गरी छनौट गरेका मान्छेहरुलाई मात्र राहत दिने काम भएको छ । सदस्य संख्याको आधारमा २ जनामात्र सदस्य हुने परिवारको लागि १५ केजी चामल, ४ जना सदस्य परिवारको लागि २० र सो भन्दामाथिकोमा २५ केजी चामल घरघरमा पुर्याएर वितरण गरिएको छ । त्यसैगरी सदस्य संख्याकैआधारमा मुसुरोको दाल, खाने तेल, र नुन पनि वितरण गरिएको छ ।
लकडाउनबाट कोठा भाडामा लिएर बस्नेलाई समस्या परेको छ । यदि कुनै व्यवस्था भयो भने उनीहरु अफनो घर जान चाहानुहुन्छ । त्यस्तालाई घरपठाउने बारेमा तपाईहरु के सोच्दै हुनुहुन्छ?
लकडाउन भनेको जो जहा, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ । सोही स्थानमा पुर्ववत बस्ने भन्ने हो । संघ र प्रदेश सरकारले पनि त्यस्तालाई घर पठाउने कुरामा केही निर्देशन गरेको छैन । हामी पनि उनीहरुलाई घर पठाउने कुरामा भन्दा यही बस्नको लागि सहज वातावरण बनाउन लागि परेका छौं । खान, बस्नको निम्ति उहाहरुलाई कुनै समस्या परेको छ भने यस्मा नगरपालिकाले सहयोग गर्छ । पेसा, व्यवसाय र अन्य कामको सिलशिलामा निजगढमा बस्ने विद्यार्थी, कर्मचारी वा जो कोहीलाई पनि लकडाउनबाट अपठ्यारोमा पर्न नदिन निजगढ नगरपालिका अभिभावकको रुपमा काम गर्दै आएको छ । यसमा कुनै चिन्ता नलिइकन निर्धक्कसंग निजगढमा नै बस्न म सबैलाई आग्रह गर्न चाहान्छु ।
नगरपालिकाले विपद व्यवस्थापनको लागि कोष पनि खडा गरेको छ । शुरुमा ५० लाख राखिएकोमा तपाईको प्रस्तावमा फेरि थपेर पछि १ करोड पुर्याइयो भन्ने पनि छ । खासमा कोषको रकम कसरी बढेको हो?
– लकडाउन र सामाजिक दुरी कायम गर्ने भन्ने कुराले शुरुका केही दिन कार्यपालिकाको बैठक डाक्न पनि सकिएन । त्यतिबेला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा केही वडा अध्यक्ष ज्युहरुसमेत बसेर ५० लाखसम्मको कोष खडा गर्ने निर्णय भएको थियो । पछि कार्यपलिका बैठकमा छलफल हुदा कोषको रकम कम भएको हो कि भन्ने बारेमा कुरा उठ्यो । बैठकमा रकम बढाउनु पर्ने प्रस्ताव मैले नै गरेको हुँ र हाल कोषको रकम बढाएर १ करोड २ लाख पुर्याइएको छ । नगरपालिकाको पुर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमबाहेक चालु खर्च अन्तरगतको तालिम, गोष्ठी, अनुगमन, जनप्रनिधिहरुको भत्ता शीर्षकमा रहेको रकम कटाएर कोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ ।
कोरोना संक्रमणबाट महिला वर्ग बढी प्रभावित हुनसक्ने पनि देखिन्छ । यसकोलागि महिला लक्षित कुनै योजना बनाउनु भएको छ कि, छैन?
त्यस्तो महिला समुदायलाई मात्र लक्षित गरेर नगरपालिकले हाल कुनै कार्यक्रम÷योजना बनाएको छैन । किन भने, रोग सबैलाई लाग्नसक्छ र यसले महिला÷पुरुष भनेर छुट्याउदैन पनि । तर फेरि कुरा के पनि हो भने परिवारका सदस्यहरुलाई स्वास्थ्य शिक्षा दिने, घर परिवारको सरसफाइ गर्ने, सदस्यहरुको स्वास्थ्य हेरचाह जस्ता कुरामा भने महिला सदस्यको अत्यन्तै ठुलो भुमिका हुन्छ । म यसै कार्यक्रममार्फत संक्रमणबाट जोगिने उपायको बारेमा थप ख्याल गर्न आमा, दिदी÷बहिनी महिलाहरुमा आग्रह गर्दछु । तर अहिलेको संक्रमणको यो अवस्था लम्बिदै जादा तेतिबेला विकसित हुने परिस्थितिअनुसार महिला लक्षित छुटै कार्यक्रमको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने हुनसक्छ । यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने हामी सोहीअनुसार काम गरेर अघि बढन पनि तयार तयार छौं ।
अब, अलि फरक प्रसङ्गमा पनि केही कुरा गरौं । महिला समुदाय
कोे सीप, क्षमता र आय आर्जन बढाउने कार्यक्रम बारे तपाईले के सोच्नु भएको छ?
महिलाहरुको सीप, क्षमता र बढाएर उद्यमी र रोजगार बनाउने र आयआर्जन बढाउने कुरामा म शुरुदेखि नै गंभिर छु । हुन त यसअघि पनि नगरपालिकाले महिलाको सीप क्षमता र आय अभिवृद्धिकोलागि भनेर छोटो अवधिको तालिम गोष्ठी, अवलोकन भ्रमण जस्ता काम गर्दै आएको थियो । तर तालिम लिएर त्यसलाई व्यवहारमा नल्याउने गरिएकाले त्यस्ता कार्यक्रमहरु खासै प्रभावकारी देखिन सकेका छैनन । त्यसैले अब र त्यस्ता कनिका छरे जस्तो कार्यक्रमको साटो अलि ठुलै लगानीमा महिला रोजगारी र आयआर्जन बढाउने खालका कार्यक्रम संचालन गर्ने हाम्रो सोचाइ छ । यसको लागि नगर परिषदबाट शंशोधन गरेर कार्यक्रम र बजेटसमेत सभामा लैजाने तयारी पुरा भैइसकेको स्थिति थियो । तर हाल अर्पझट आइलागेको कोरोना विपदको कारण सो रकम विपद कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले फेरि यसबर्ष त्यसो गर्न सकिने अवस्था रहेन । तर आगामी बर्षबाट महिलालाई उद्यमी बनाउने गरी स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट विभिन्न किसिमका वश्त्र तयार पार्ने, केराको थम्बाबाट परिकार र अन्य सामानहरु बनाउने र उनीहरुको रुचिअनुसार साना उद्योग खोल्ने जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्ने पक्षमा छौं ।
By Nepali Computer Technology on 1:16 AM
by Nepali Computer Technology
Some Important FullForm of Computer For Class 10
Studenst Some Important FullForm of Computer For Class 10 (Grade X) FULL FORMS 3D: Three Dimension 4GL: Fourth Generation La...
Solved exercise of Computer Number System of class 10
Hey all how are you all I hope all of you readers are fine.Today I am going to provide you all Some SLC Important Computer Solved question a...
SLC Model Question of Computer Science
Computer For Class 10 (Model Set 1) Model Set 1 Group A Fundamentals 1. Answer the following questions : - ...
Download Prem Geet Nepali Movie Mp3 Songs
AAsusen Film Production Sotry / Director : Sudarshan Thapa Producer : Santosh Sen Screen Play / Dialogue : Ramsharan Pathak Cast : Pooj...
TECH LEARN. Powered by Blogger.
Ghumto Partha / Prada System in Nepal
Ghumto Partha as we also says Prada System is popular in Nepal . Covering Head by Married woman is called gumto system. The literal meani...
© 2015 Nijgadh.com powered by Blogger.com - Pralad Pralad All Right Reserved
Template By Pralad | Published By Nijgadh Media